10 Amathiphu Ukuhlala Kumumo ngenkathi Ukuhamba | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Amathiphu Ukuhlala Kumumo ngenkathi Ukuhamba
Ukuhlala usesimweni ngenkathi uhambela ngaphandle kokungabaza kuyinselele. Ukudla okulingayo kuhlala kunikezwa. Lokhu kuhlangene nekhefu kwendlela yakho ejwayelekile yokuzivocavoca evame ukuholela ekuweni kwenqola yokuqina. Ngakho-ke umuntu uhlala kanjani elungile ngenkathi ehamba? Akunzima ngendlela ocabanga ngayo. Mane unamathele emithethweni embalwa elula, sebenzisa amandla athile, futhi uzokwazi ukuza ekhaya impilo enhle efanayo eqale iholide lakho.
Izincwajana zemininingwane Ezokuthutha Is The nokunobungane Way Izikhangibavakashi. Lesi sihloko kulotshiwe sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, Iwebhusayithi Amathikithi Eshibhe kakhulu Emhlabeni.
Hamba Kangakanani Ngokusemandleni akho Ukuze uhlale Ufanele
Nakuba sisebenzisa izithuthi zomphakathi kungazwakala njengohlelo olulula kakhulu, zama ukuhamba esikhundleni. Amabanga amafushane makhulu kulabo abangalingani kakhulu, kepha uma wenza okuningi, kokuqina kwakho lapho usohambweni kuzonyuka. Ukuhamba ibanga elide ngokushesha kungenza umehluko lapho uhlala usesimweni ngenkathi uhambela labo asebevele belungele. Cabanga ukwehla ebhasini lakho noma etekisini amabhulokhi ambalwa ngaphambili ukuze ukwazi ukuhamba okusele. Izitimela, kunjalo, futhi indlela enhle yokuhamba hhayi nje ukusuka ezweni kuya kwelinye, kepha idolobhana ngasedolobheni. Yeqa esitimeleni sakho ume kancane, futhi uthathe amasayithi nemisindo yendawo yakho yeholide ukukhulisa ikhono lakho lokuhlala usesimweni ngenkathi usohambweni.
Paka Ishuni Esilungile
Uma uhlela ukuhlala usesimweni ngenkathi uhambela ke zilungiselele ukuqhubeka nokusebenza, noma ukuhamba ngezinyawo, noma ukuhamba ngebhayisikile udinga ukuthi uqiniseke ukuthi unemishini efanele. Gcina lokhu engqondweni ngenkathi upaka. Uma kufanele ukhethe phakathi kwesinye isimbambo sezicathulo ezi-smart noma i-pair of sneakers, ukupakisha amahembe. Ngeke kube khona okubi ngokwedlula ukufika endaweni enhle, uqaphela ukuthi NGEMPELA ufuna ukubaleka, futhi ungakwazi ngoba ushiye igiya elifanele ekhaya. Ukuvuka kusesekuseni bese uyofuna i-jog kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokubona. Ngaphambi kokuthi bonke abanye baphume embhedeni, umhlaba uthule futhi muhle. Awungeke ukwenze lokhu nge-jean namabhuzu.
Beka eceleni 15 Amaminithi wokuhlala ku-Shape ngenkathi Uhamba
Ukuhlala usesimweni ngenkathi uhambela imayelana nokuzivocavoca umzimba. Awulindeli ukulonda isisindo semisipha yakho nokuqina ngenkathi usohambeni uma udla ukudla okuningi, phuza imithwalo yeziphuzo, futhi ungenzi noma yikuphi ukusebenzisa. Udinga kuphela 15 imizuzu njalo ekuseni ukuthola i-mini yokuzivocavoca ngaphakathi. Uma usendaweni engokwemvelo efana nolwandle, phuma ngaphambi kokuthi kube matasa kakhulu, futhi wenze ukuqeqeshwa kwe-yoga noma amandla esihlabathini. ICardio ingatholakala ngokugijima, ukushaywa, noma ukubhukuda okusheshayo. I-YouTube inamavidiyo amaningi amahle anemibono amafushane, ukusebenzisa okusekelwe eholidini ukugcina nokuthuthukisa ukuqina ngenkathi usohambweni. Zama ukungaphuzi ngokweqile kusihlwa noma, ngoba lokhu kuzoba nomthelela ekusetshenzisweni kwakho kwasekuseni futhi ekugcineni ukuthi uhlale kanjani usesimweni ngenkathi uhamba.
Hlala ku-Shape ngenkathi Uhamba Ngokudla Ngokudla Okunempilo
Okumnandi, ama-buttery croissants nezinye izinto ezinhle zingakufica kusuka ngemuva kwezingilazi zokubala ezingilazi, kepha kuhlale kuwumqondo omuhle ukugcina isilinganiso esilinganayo samandla. Yidla okuphatha, ngazo zonke izindlela, kepha ungagxili. Ngena kwezinye izithelo zokudla kwasekuseni, nesaladi lesidlo sasemini ukukusiza ngokuhlala usesimeni ngenkathi uhamba. Ngaleyo ndlela ugcine ama-kilojoule akho aphansi ngokwanele ukuba ukwazi ukujabulela ukudla kwakusihlwa kancane.
Ukuhlala Ku-Shape ngenkathi Ukuhamba Ngokuthatha Izitebhisi
Uma uhlala ehhotela elinezitezi eziningi, unethuba elihle! Esikhundleni sokuthatha ilifti, thatha izitebhisi! Lokhu kuguqulwa okulula komkhuba kuzothola i-Cardio eningi nsuku zonke, futhi sikumisele uhambo olunempilo nolunempilo. Uma ungenazo izitebhisi noma indiza eyodwa kuphela, thola amanye endaweni yangakini bese uwagibela phezulu noma phansi izikhathi ezimbalwa ukusiza ngokuhlala usesimweni ngenkathi usohambweni.
Gibela Ibhayisekili Ukuhlala Kumumo ngenkathi Uhamba
Ngendlela efanayo naleso esasikuphakamise ukuthi uhambe esikhundleni sokuthatha ibhasi, zama ukuqasha ibhayisekili esikhundleni sokubamba izinto zokuhamba. Amazwe amaningi ayoba nawo emabhayisikili atholakala ngokuqashwa. Bamba isitimela eduze nalapho uya khona, bese uthatha indlela yokuhamba ngebhayisekili yonke indlela. Lapho ufuna ukubuya, umane ujikeleze emuva ku- esiteshini sesitimela bese ushiya ibhayisekili lakho lapho uluthole khona, kuhle ukuhlala usesimweni ngenkathi uhamba!
Bheka Imisebenzi Yasendaweni Futhi Hlala Ku-Shape ngenkathi Ukuhamba
Amazwe amaningi anezinto zasekhaya ezihlelelwe emadolobheni. Yoga noma calisthenics emapaki noma izintaba ezihlelekile zivame ukutholakala. Joyina kule micimbi ukuze uhlale usesimweni ngenkathi uhambela. I-CrossFit ngenye into eyenzeka emhlabeni wonke ethuthukisa ukuqina komzimba, ngakho-ke thatha isikhathi kuhlelo lwakho lokujoyina iklasi, kungaba ngaphakathi noma ngaphandle. Umhlahlandlela wakho wasendaweni noma i-concierge kufanele ikwazi ukukukhomba lapho kufanele khona.
Sebenzisa Izikhungo Zezitimela Nezikhumulo Sezindiza Njengamkhondo Wokuhamba
Kumnandi njengokuhamba ngesitimela, alikho ithuba eliningi lokuzivocavoca ngenkathi uthamba empeleni. Okufanayo kuhamba ngezindiza. Ngenkathi ulinde indiza yakho noma isitimela, thatha ithuba lokuxhuma ezindlebeni ezithile bese uthatha umjiko wokujikeleza itheminali ukusiza ngokuhlala usesimweni ngenkathi uhambela. Qiniseka ukuthi umthwalo wakho uphephile kuqala, Nokho! Njalo shiya umsebenzi wakho kumuntu omethembayo. Njengoba uhamba, faka ezinye izidlo zasemini ekuhambeni. Ungahle ubukeke uhlekisa, kepha umzimba wakho uzokubonga ngokuhamba kwesikhathi. Ukuhlala usesimweni ngenkathi uhambela kubandakanya ukuthatha wonke amathuba okuziveza. Bhuka ithikithi lakho lesitimela online manje, futhi uzinike isikhathi esengeziwe sokusebenzisa ngokunenzuzo ukuze uhlale usesimweni!
Paka Amabhendi Wakho Wokuqina Ukuze Uhlale Kumumo ngenkathi Uhamba
Amabhendi wokuzivocavoca angasindi, Kulula ukuthwala nendlela enhle yokuhlala unqunyiwe ngenkathi uhamba. Ungazibeka egumbini lakho, futhi udale isekethe yokuzivocavoca esikhala endaweni elula kunazo zonke. Thatha isikhathi nsuku zonke ukwenza isiyingi noma emihlanu yesekethe yakho, futhi ngeke uzizwe kabi ngokudla wonke ama-pastry amnandi.
Nciphisa Utshwala Bakho
Ukuba naleso sidli sedamu echibini, noma ubhiya obandayo ku-pub uhlala muhle. Ukweqa ngokweqile kuzoholela ekwehleni komzimba wakho. Hhayi nje ngenxa kashukela kepha futhi nokuntuleka kwesisusa ngosuku olulandelayo. Yiba nesiphuzo esingajwayelekile uma ufisa, kodwa zama ukuyigcina okungenani. Khumbula ukuthi ama-cocktails amnandi kashukela aphezulu kakhulu kumakhalori, njengobhiya ngisho newayini elimhlophe. Ukuzisebenzela ukusiza ukusiza ukuhlala usesimweni ngenkathi usohambweni kuzokwenza kube nzima kakhulu ukusebenzisa kwakho okuhleliwe.
Ukuhamba kumnandi kumnandi ezimweni eziningi. Ingakwazi, Nokho, phazamisa kakhulu kunoma imuphi umbuso wokuqina. Ukuhlala usesimweni ngenkathi uhambela kuhlanganisa ukunamathela kuhlelo lokudla olunempilo kanye nokuzivocavoca umzimba ngangokunokwenzeka noma nini lapho ukwazi. Ungakhohlwa ukukhawulela iziphuzo ezinoshukela. Khetha Londoloza Isitimela, singathanda ukukusiza ukuba ujabulele uhambo lwakho!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “10 Amathiphu Ukuhlala Kumumo ngenkathi Ukuhamba” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-staying-shape-traveling%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, futhi ungangena esikhundleni se-es to fr noma nl nezilimi eziningi ozikhethayo.
europetravel longtrainjourneys I-StayFit I-StayInShape Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Travelingtips